ဖုံး battery ပြုံး sexy | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » ဖုံး battery ပြုံး sexy
ဖုံး battery ပြုံး sexy
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jul 22, 2013 in Computer & Cell Phone | 27 comments
စမတ်ဖုံး ကမ္ဘာဂျီးမှာ ကျုပ်တို့တတွေ အရာရာဒိုင်းဂို ဖုံးကနေ လုပ်နေဂျပြီ။ အီးမေးလ်စစ်တာ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ပို့စ်က အစ ဗွီဒီယိုကြည့်တာ အလယ် အင်တာနက် ကလိတာ အဆုံးပေါ့ဗျာ…။ အဲဒါတွေလုပ်ဖို့ ပေးဆပ်ရတာဃဒေါ့ ဖုံးဘက်ထရီ ခဏနဲ့ ဂန့်သွားခြင်းပါဗဲ..။။
ဖုံးဘက်ထရီ ကြာကြာခံစေတဲ့ နည်းလမ်း တဒါဇင်လောက်ရှိဒါ သိရင် အနည်းဆုံးဒေါ့ အားပြန်ဖြည့်တဲ့ အကြိမ် လျော့သွားပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်အထိ ဖုံးအား မကုန်နိုင်ဘူးပေါ့..။
လင်းလေကုန်လေ။ နဂိုဖုံးမျက်နှာပြင်ရဲ့ အလင်းရောင်ဟာ လိုတာထက်ပို များနေတတ်လို့ တခုတည်းသော ဘက်ထရီအား အဖြုန်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာ မြင်နိုင်တဲ့အထိ အလင်းရောင် လျော့ချလိုက်….
စောစောအိပ်။ ဖုံးကို အသုံးပြုပြီးရင် ဘယ်လောက်မြန်မြန် ပိတ်သွားမလဲ လုပ်ထားလို့ရတယ်။ ဖုံးတခုခုသုံးပြီး စခရင်မ်ဂျီး အချိန်တခုလောက် ပွင့်နေတာထက် ခပ်မြန်မြန် သူ့အလိုအလျောက် ပိတ်သွားတာ ဖုံးဘက်ထရီ သိသိသာသာ တာရှည်ခံစေတယ်။
ခေါ်တိုင်း မပြောဂျေး။ အက်ပလီကေးရှင်း အများအပြားမှာ ဘာညာကွိကွ အသိပေးချက် ပေါ်လာတတ်တယ်။ အများစုက အာပလာတွေ၊ ဖုံးမျက်နှာပြင်က သူတို့အတွက် ခဏခဏ နေရာပေးနေရမှတော့ ဘက်ထရီပါဝါ ခံနိုင်ပါတော့မလား။ အဲဒီ ဆော်ဩမှုတွေ လက်ခံစရာ မလို။
မလိုရင်ဖြုတ်။ ဘလူးတုသ်လို အင်တာနာဆို မသုံးသလောက်ဗျာ။ အဲဒီဟာမျိုး ဖြုတ်ပစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။ ဝိုင်ဖိုင်လည်း ထိုနည်း၎င်း (မသုံးရင်ပြောဒါ)။ အကယ်၍ ဘက်ထရီ ကုန်ခါနီးမှာ ဖုံးသုံးဖို့ လိုနေသေးရင် ဖုံးကို လေယဉ်ပေါ်သုံး အနေအထားသို့ ပြောင်းပေးပါ၊ အသံအပါအဝင် ရေဒီယိုလှိုင်းတေ ဝင်မလာနိုင်ဒေါ့ဗူး..။
အဆာပလာ နဲပါစေ။ ပေါ်ပင် အဆာပလာတွေ ကောင်းပေမဲ့ အဲဒါတခုနဲ့တင် ဖုံးဘက်ထရီ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း စားတယ်။ ဘလူးတုသ်နားကြပ်၊ ကားတွင်းသုံး၊ အခြားအဆင့်မြင့် ကိရိယာတွေကလည်း ဖုံး ညောင်းစေတာပဲ။ ပါဝါ ကြာကြာခံလိုရင် အပိုဆာဒါး ကိရိယာ အရေအတွက်လျော့ဗျို့။
နေရာမေး ဖြေစရာမလို။ အက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာ သူတို့ပေးချင်တဲ့ သတင်းတွေ ခွဲခြားပို့နိုင်ဖို့ ဖုံးနေရာ မေးလေ့ရှိတယ်။ အသုံးဝင်ကောင်း ဝင်ပေမဲ့ အက်ပလီကေးရှင်းက ဖုံးဂျီပီအက်စ် ချစ်ပ်ကို လှမ်းချိတ်လိုက်တိုင်း ဖုံးပါဝါစားတယ်။ အဲဒီနေရာ အချက်အလက်သည် ကိုယ့်အတွက် အသုံးမကျ ဖြုတ်ပစ်တာ အကောင်းဆုံး..။
သိပ်မရွနဲ့။ စမတ်ဖုံး အများစုမှာ အီးမေးလ်နဲ့ အပက်လီကေးရှင်း အချက်အလက်တွေ ၁၅မိနစ် (သို့) ၃၀မိနစ် တခါစစ်ဖို့ လုပ်ထားတယ်။ ကိုယ်က ခဏခဏ သိဖို့မလိုအပ်ရင် စစ်တာကို နာရီခြားတခါသို့ ဆွဲဆန့်လိုက်ပါ။ ဖုံးဘက်ထရီ သက်တမ်း သိသိသာသာ ပိုကောင်းလာမယ်။
တိုးတိုးလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး။ ဖုံးမြည်သံ အပါအဝင် ဖုံးအသံ အားလုံး တိုးထားနော်။
တုန်ခါရင် ရုံနာဒယ်။ ဖုံးကို အိပ်ကပ်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဖုံးမြည်သံ မလွတ်စေဖို့ ဖုံးလှုပ်ခါနေစေတာ အသုံးဝင်ပေမဲ့ ဖုံးဘက်ထရီအား အလွန်ကုန်စေတယ်။ ဖုံးကြာကြာ သုံးချင်ရင် အဲဒါဂျီးကိုပိတ်..။
အေးစေသတည်း။ ပူနေတဲ့ ဘက်ထရီသည် အေးနေတာထက် အကုန်မြန်ဒယ်.. ဖုံးကိုင်လိုက်လို့ ပူနေရင် ဘက်ထရီလည်း မြန်မြန်ကြွမှာပဲ။ ကားထဲ အိပ်ကပ်ထဲ ပစ်ထားရင်၊ ပူနေတဲ့ လက်ပ်တော့ပ် ကွန်ပြူတာလိုမျိုး စက်တခုခုအပေါ် တင်ထားရင် ဖြစ်တတ်တယ်။ အဆက်အမပြတ် ဖုံးသုံးရင်လည်း အပူမြင့်လာတတ်တယ်။
အကိုင်းကြီးကြီးမှာနား။ အချိန်တခုအတွင်း ဖုံးမသုံးတာ သေချာရင် ……အစည်းအဝေးခန်းထဲ၊ ရုပ်ရှင်ရုံထဲ….. ဖုံးမြည်သံ ရပ်ထားမည့်အစား လုံးဝပိတ်လိုက်ပါ။
By Dave Johnson | CBS MoneyWatch – Wed, Jul 17, 2013 5:45 PM EDT
(Photo: Aaron Yoo – Flickr)
ကျေးကျေးဗျာ ..ဖုန်းအားကုန်မယ့် အကြောင်းတွေ ရှိလာဒါမို့ ..ငိငိ.
ဓာတ်ပုံက ကိုယ့်အားကိုယ်သွင်း ပုံလားဟမ် ??
ပြောဦးလေ… ဟန်းဖုန်းနဲ့ ဟိုရိုက်သည်ရိုက် ရှောက်မရိုက်နဲ့…
အင်တာနက်ပေါ် ဂန့်လိမ့်မယ် လို့…
ကဲ ကဲ ​နေ့လည်​မှာ တရား​ဆွေး​နွေးမယ်​ ဘယ်​လိုလဲ
လက်တွေ့ ကျကျ အသုံးဝင်ပါတယ်…ဦးကြောင်…
လက်ပ်တော့ဘက်ထရီလည်းအတူတူပါပဲ..။ အများအားဖြင့် ဒီခေတ်ဘတ်ထရီတွေက လစ်သီရမ်အိုင်းယွန်းသုံးတာမို့ပါ..
ဘက်ထရီတိုင်းမှာ.. (လူလိုပဲ) သက်တမ်းရှိပါတယ်..။
၁) ဘက်ထရီကို အကြာကြီး(၁၀၀%အပြည့်) ချပ်ခ်ျမလုပ်ပါနဲ့.. (Overcharging Lithium-ion)
၂) ဘတ်ထရီကို.. အကုန်ကုန်ပြီး.. ရပ်သွားတဲ့အထိ..(0%)မသုံးပါနဲ့.. (Over-discharging Lithium-ion)
၃) (ဖြစ်နိုင်ရင်) အားသွင်းနေချိန်.. ဆဲလ်ဖုံးကိုပါဝါပိတ်ထားပါ..
အဲဒါဆို.. ဘတ်ထရီဟာ.. ပုံမှန်ထက်.. သက်တမ်းပိုကြာပါမယ်..
ဘက်ထရီဟာလျှပ်စစ်အားကို ကြာကြာမထိမ်းနိုင်ပဲ.. သက်တမ်းအရမ်းတိုနေတဲ့အခါ..လုံးဝအားတွေအကုန်ထုတ်လိုက်ပြီးမှ.. တခြားလစ်သီယန်ဘက်ထရီကနေ.. ဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာအားပြန်ဖြည့်ကြည့်ပါ..
အားပြည့်တဲ့အခါမှာ.. လျှပ်စစ်အားထိမ်းသိမ်းနိုင်စွမ်း(အနည်းငယ်) ပြန်တက်လာပါကြောင်း..
40000mah146.5wh External Battery Mobile Power Charger For Laptop Phone
40000mah146.5wh External Battery Mobile Power Charger For Laptop Phone, Specification:Color:, BlackAluminum, alloy, case, materialCapacity …
အဲလိုမှန်း မသိလို့ ကိုယ့်ပိုစ့်မှာ ကြောင်ကို စော်ကားမိတာ ဘွာတေးနော်။
အူးကြောင် ဖုန်းကင်တဲ့ ပညာရှိမှန်းမသိလို့ စော်ကားမိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ..
အ၀ှာကားတွေ အကြည့်များရင်ကော ဖုန်းဘက်ထရီးစားလား…
မနောဖုန်းတော့ ဘက်ထရီအားသွင်းချိန်မှာ တစ်ခါမှ မပိတ်ထားမိဘူး။ နောက်ပြီးတော့ တစ်ညလုံး အိပ်ပြီး အားသွင်းထားရင်ကော အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား။ အခု အဲဒီလိုအမြဲလုပ်ဖြစ်နေလို့ပါ။ တစ်ခါတလေ မသုံးပဲနဲ့လည်း ဟန်းဆက်က ပူနေတာလည်း ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး။ နောက်တစ်ချက်က တစ်ခါတလေ ဆော့ဝဲလ်လည်း မများပဲနဲ့ ဖုန်းက ဟန်းဟန်းနေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။
အဲ့ဒိ ဒုက္ခတွေ မခံချင်လို့ … ကမ္ဘာ့ နံပါတ်တစ် ကော်ကျွတ်ဖုန်းတွေ မသုံးဒါပေါ့…
ဟမ်းး ဒက်ဒီရဲ့ ပို့စ်မှာ နည်းလမ်းတစ်ခု ထပ်ဖိဘာ့မယ် ..
ဖုန်း ဘက်ထရီ ကို
တစ်ပတ် တစ်လ အားသွင်းစရာ မလိုအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုဒေါ့ …
ဘက်ထရီ ကို အားအပြည့်သွင်းပီး ဖြုတ်ထားပါ …
တစ်ပတ် တစ်လ ပြည့်မှ ပြတ်တပ်ပီး ဖွင့်ကျိဘာ …
ဂုတစ်လော အားတာနဲ့ OZမိုဘိုင်းဂိန်းဆော့နေတာ ဖုန်းပူ စကင်ဟန်းမှရပ်တော့ဒယ်
ဦးကြောင်ရေ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
50% ရောက်ရင် အားသွင်းတယ်။အားသွင်းရင်း အွန်လိုင်း
ဒီလိုမျိုးတနေ့ကို သုံးကြိမ်လောက်အားသွင်းရင်း အွန်လိုင်း
လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ ဘက်ထရီက ဖြုတ်လို့မရတဲ့ အမျိုး
ပြီ။ ဘက်ထရီကတော့လန်းနေတုန်းပဲ။ ညပိုင်းအားအပြည့်
သွင်းထားရင် မနက်ထိ 3-4 % ပဲ စားတယ်။
ပြီးတော့ ဘက်ထရီ တွဲရက် ဖုန်းတွေ ဘက်ထရီ ပျက်သွား
ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ လဲ သိချင်ပါတယ်။
ဘက်ထရီ တွဲရက် ဖုန်းတွေ ဘက်ထရီ ပျက်သွား
အဟမ်းးး ကျုပ် အနေနဲ့ အကျံပေးရရင်ဒေါ့ဖင့် …
လွှင့်ပလိုက်ဒါ အီကောင်းဆုံးဘာဘဲလို့ .. ဟီးးး
ပိုစ့်ရေးသူဟာ ဟိုအစိမ်းကောင်ကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်…
ပထ၀ီခံဖို့အတွက်… အဲ့ဒီလောက်တောင်ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်…
Smart Phone ဆိုရင် တကယ် Smart ဖြစ်မှ သုံးချင်သကွယ့်…
ပထ၀ီမန်းနေ့ချမန့်မှ မနိုင်သေးပဲနဲ့ Smart ဖြစ်မတဲ့လား… အစိမ်းကောင်ရယ်…
ဟငိ ဒီတခါအတည်ကြီးဘာလား။ မှတ်သားစရာမို့မှတ်သားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အတည်ပြောပါသည်။ အဟိငိ
smart phone တော့ မတတ် နိုင် သေး လို့ မသုံး ဖြစ် သေး ပါ ဘူး ။
လောလော ဆယ် သုံး နေ တဲ့ semi- smart phone အတွက် spare battery နဲ့ charger တစ် စုံ ကို ဝယ် ပြီး ၊
အ လုပ် လုပ် တဲ့ နေ ရာ မှာ ထား ထား တယ် ။ ဓါတ်ခဲ အား အမြဲ အပြည့် ဘဲ ပေါ့ ။
ဖုံး ကို စကား ပြော ဖို့ ၊
အီးမဲလ် အ တွက် ၊
အ ချိန် ပြည့် Radio နား ထောင် ဖို့ ( ဓါတ် ခဲ အား အ ကုန် ဆုံး )
ဓါတ် ပုံ ရိုက် တာ ကနေ လွှဲ လို့ တခြား functions မ သုံး တတ် ပါ ခင် ဗျား ~~~
ကျုပ်က သွားရင်းလာရင်း လမ်းမှာ အင်တာနက်သုံးချင်တာကို ဖုံး ဆိုင်က ကောင်မလေးတွေကို အကြံတောင်းမိတာ
ဖုံးနဲ့ ၀ိုင်ဖိုင်လွှင့် (Hot Spot) တက်ဘလက်နဲ့ ဖမ်းပြီး သုံးဖို့ပြောတာနဲ့ အဲဒီနှစ်ခုဝယ်သုံးဖြစ်တာ
ဖုံးဘက်ထရီစားလွန်းလို့ လုံးဝအဆင်မပြေဘူး။ ပိုက်ဆံအလကားကုန်သွားတာပဲအဖတ်တင်တယ်…။
တညလုံး အားသွင်းထားတာ မကောင်းဘူး ထင်တယ်။ ဘတ္ထရီအပူမိ ညောင်းသွားတတ်တယ်။ အားပြည့်နေတဲ့ ဘတ္ထရီက ထပ်သွင်းလည်း လက်ခံမှာ မဟုတ်ပေမဲ့ အပူမိနေတာပေါ့။ အားပြည့်ရင် ရပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်။ မသုံးလည်း ပူနေတာတော့ ပို့စ်မှာပါတဲ့ အပက်လီကေးရှင်းတွေက အလိုအလျောက် runနေ အပ်ဒိပ်လုပ်နေလို့ ဖြစ်မယ်။ ပို့စ်မှာ ပါသလို setting ပြန်ထိုင်လိုက်။ မလုပ်တတ်ရင် factory setting ပြန်ချိန်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲတွေ အသစ်ပြန်ထည့်…။ အဲဒါမှ မလုပ်တတ်ရင် ဆိုင်သွားပြီး ပိုက်ပိုက်ပေး လုပ်ခိုင်း…။ ရွာသား သခင်မိုဘိုင်းလ်ရှိတယ်… သူက သဘောကောင်းတယ် ကူညီလိမ့်မယ်… အဲ…. လူရှင်းတဲ့နေရာ ခေါ်သွားလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လိုက်မသွားနဲ့… ကော်ဖီတွေ အအေးတွေ တိုက်ရင်လည်း မသောက်လေနဲ့… သူက ကျား………………………….ဂျီး………………..။
ဖုံးဘတ္ထရီ အပိုတွေ အင်တာနက်မှာ ရှာဝယ်လို့ရဒယ်။ ကျနော်တော့ ဟောဒီဆိုက်မှာ တခါဝယ်ဖူး၏ -http://www.cellphoneshop.net/celphonbat.html- အယ်လ်အေက ထင်တယ်..။ ဖုံးမှာနဂိုပါထက် ပိုအားကောင်းတဲ့ ဘတ္ထရီတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ ခဏခဏ ဓာတ်အားသွင်းရင်တော့ မြန်မြန်ကြွမှာပဲ.. ဓာတ်ခဲတွေမှာက မဂ္ဂနက်တစ် မီခြစ်တွေလို ကြိမ်ရေကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်။။ ကွန်ပြူတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ… အချိန်ကာလ၊ သုံးတဲ့အကြိမ်ရေ၊ ကိုင်တွယ်ပုံ စတာတွေပေါ် မူတည်လို့ အတိုအရှည် ကွာသွားမယ် ထင်ပါဒယ်။ ကျနော့်ကွန်ပြူတာဆို အင်တာနက်တက်၊ စာရိုက်ရုံအပြင် ဘာမှမသုံးတော့ လွှတ်မပစ်ရက်ဘူး… စက်က ကျနော့်အသက်ထက်တောင် ကြီးနေပြီ။
စကားစပ်လို့ အင်တာနက်မှ ဖတ်လိုက်ရတယ်… ကင်မရာမှာလည်း အဲဒီသဘောရှိတယ်။ ကင်မရာပါ ဓာတ်အားပြန်ဖြည့်လို့ရတဲ့ လစ်သူနီယံ ဓာတ်ခဲတွေက ကာလတခုပဲခံတယ်။ သုံးသုံးမသုံးသုံး အချိန်စေ့ရင် ဂန့်ရော… ပြီးတော့ သူတို့က နည်းပညာပိုမြင့်လို့ ဈေးပိုကြီးတယ်။ AA ဓာတ်ခဲ (သို့) ရီချာ့ခ်ျဂျေးဘဲ AA ဓာတ်ခဲ ထည့်သုံးရတဲ့ ကင်မရာကြတော့ စက်မပျက်သ၍ သုံးပေရော့… ကျနော့်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ဦးက ကိုဒက်ကင်မရာ ရှိတယ်။ ရိုးရိုးဓာတ်ခဲသုံးဆိုတော့ မပျက်ပေမဲ့ ရီဆိုလူးရှင်း ၃.၂ပဲရှိတော့ ဒီခေတ် စမတ်ဖုံး ကင်မရာက သူ့ထက်ပိုမြင့်သွားပီ။ သို့ပေမဲ့ ရီဆိုလူးရှင်း ၁၆အမ်ပီလောက် ရှိတဲ့ ရိုးရိုးဓာတ်ခဲသုံး ကင်မရာတွေလဲ ရှိတာတွေ့တယ်။ သူတို့က ဈေးပိုချိုတတ်တယ်။ အဲဒါမျိုးဆို နှစ်ခုယှဉ်ရင် ရိုးရိုးဂျီးလှေထိုး အိမ်သုံးသမားတွေအတွက် စဉ်းစားစရာပဲ..။
ခုလိုအသိပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေး ကျေးပါ
ဘက်ထရီအပို ၅ လုံးလောက်ဆောင်သွားတာတောင် တစ်ခါတစ်ရံ ဘက်ထရီ